Taorian’ny fitsidihana nataon’ny Filoha tany Sina : Tonga sahady ireo mpamatsy vola -
AccueilRaharaham-pirenenaTaorian’ny fitsidihana nataon’ny Filoha tany Sina : Tonga sahady ireo mpamatsy vola
07/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fitsidihana ofisialy nataon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery tany Sina dia tsy niandry ela ireo mpamatsy vola fa tonga eto Madagasikara sahady hijery ny fahafahana raharaham-barotra azo atao. Ao anatin’izay indrindra, tonga nitsidika ny minisitry ny Asa vaventy, Razafimandimby Eric, omaly antoandro ny lefitry ny ben’ny tanàna avy any amin’ny faritany Whenzou ao Sina, niaraka tamin’ny antenimieran’ny varotra sy ny solontenan’ireo mpamatsy vola. Marihina moa fa isan’ireo faritany mandroso any Sina i Whenzou ary araka ny loharanom-baovao voaray dia miakatra 25 isan-jato ny fivoaran’ny toe-karenan’ny famatsiam-bolany isan-taona. Vokatr’izay, lasa ny tsy miankina no manana vola betsaka ampiasaina ary raha mitombo ny volan’ny tsy miankina dia voatery mitady toerana hahafahana mamokatra aty ivelany i Whenzou ka mandeha aty Afrika, hoy ny minisitra Razafimandimby Eric.
Nandritra ny tafatafan’ny roa tonta dia fantatra fa ny ZES (Zone économique special) no tena mahaliana ireo mpamatsy vola satria io no efa nahitana vokatra tamin’ny fiainan’ny Afrikanina maro, tahaka ny tany Maorisy, Mozambika sy ny maro hafa. Tsy mijanona hatreo fa mitady ny sehatra rehetra hiasana ireo mpamatsy vola ireo, na eo amin’ny fotodrafitrasa, eo amin’ny “agro-alimentaire”, na “industrialisation”. Ary noho ny fananan’i Madagasikara fahafahana raharaham-barotra maro dia fantatra fa hitatitra izany rehetra izany any amin’ny mpandraharaha any Whenzou ireto solontenan’ny mpamatsy vola avy any Sina ireto, ka ho avy betsaka izy ireo ato ho ato. “Ho avy betsaka ny mpandraharaha sinoa amin’ny faran’ny volana Aprily sy amin’ny volana Mey iny, hiezaka hitondra “investissement direct étranger” ngeza be aty Madagasikara. Ary noho ny, fitsidihana nataon’ny Filoha tany an-toerana, hita tokoa fa nitondra fahazotoan’ireo mpamatsy vola sinoa. I Madagasikara ihany koa, miezaka manazava amin’izy ireo ny didy mahakasika ny tombontsoa amin’ny fotodrafitrasa, na mindrana vola”, hoy hatrany ny minisitra. Tsara ho fantatra fa ny fomba fiasan’ny sinoa dia ny PPP (Partenaire public privé). Fantatra izao fa vonona hanampy an’i Madagasikara ny sinoa ary betsaka ny famatsiam-bola entin’izy ireo ao anatin’izany.
Lalao Ravalomanana : Fototry ny fampikatsoana ny CUA